गगनको गनगन, आफूले गोँध्दा सहि अरुलाई कायर भन्छन्
“ज्ञानेन्द्र शाही माथि आक्रमण गर्ने विचरा कायरहरुका बारेमा के टिप्पणी गर्नु ? यो कायरताका लागी उक्साउनेहरू दोषी हुन् । अब हिसाब किताव यीनै सँग माग्नु पर्छ ।”
माथि उदृत गरीएको उदृताम्स नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद गगन थापाको ट्विट बाट लिइएको हो । थापाले भने जस्तै कसैमाथि अन्याय गर्नेहरू कायर हुन् । थापाको यस भनाइ सँग असहमत हुनु पर्ने कारण यहाँ देखीदैन ।
प्रजातन्त्रमा वाक स्वतन्त्रतालाई मानव अधिकारको महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा बुझिन्छ । हाम्रो जस्तो समावेसी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अबलम्वन गरेको देशमा कुनै पनि नागरिक असुरक्षीत हुनु हुँदैन । यस मानेमा थापाले शाहीको पक्षमा गरेको वकालतको विपक्षमा बिचार बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
तर हरेक सिक्काका दुई वटा हुन्छन् भने जस्तै प्रत्येक घटनाका पनि पक्ष र विपक्ष हुन्छन् । घटनाको यथार्थ र गहन विश्लेषण नगरी निर्माण गरिने बिचार एकाङगी हुन्छन् भन्ने सत्य पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
शाही वा अरु कसैमाथि हुने भौतिक वा अन्य आक्रमण भत्र्सना योग्य छन् । कम्तीमा यस्ता कर्तुतहरूको विरोध गर्ने पर्दछ । तर शाही माथि भएको आक्रमणको विषयलाई लिएर थापाले गरेको उक्त ट्विट पढेपछि मलाई भने अलिक नोस्टाल्जीक हुन मन लाग्यो ।
प्रसङ्ग म आफू पूर्ण रूपमा त्रिचन्द्र कलेजको विद्यार्थी हुँदा ताकाको हो । जुनबेला मलाई राजनीति भन्दा बढि साहित्य र अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापमा दिलचस्थी थियो । त्रिचन्द्र कलेज पिताजीले समेत स्नातक अध्ययन गरेको कलेज भइकोले र मेरा धेरै काथीहरु पनि सोहि कलेजमा भर्ना भएका कारण म उक्त कलेजमा भर्ना भएको थिए । म त्यो कलेजको विद्यार्थी भइरहँदा सांसद थापा उक्त कलेजको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापती थिए ।
नेपाल विद्यार्थी संघको बोलवाला रहेको उक्त कलेजमा अन्य विद्यार्थी संगठनहरू अत्यन्तै रक्षात्मक अवस्थामा थिए । त्रिचन्द्रमा नेवि संघ बाहेक अन्य संगठनहरूले गतिविधि गर्नु पूर्णत निषेध जस्तै थियो । यस्तै निषेधका बावजुद एकदिन घन्टाघर तर्फको भवनको पछाडी पट्टीको कपुरको फेदंमा अनेरास्ववीयुका कार्यकर्ताहरू भेला भइरहेका थिए । उनिहरू किन भेला भइरहेका थिए, हामी सामान्य विद्यार्थीले चाल पाएका थिएनौ । हामी घन्टाघर विल्डीङ्गको दोश्रो तल्लामा अनिवार्य अङ्ग्रेजी पढिरहँदा कपुरको फेदमा एक्कासी हल्ला खल्ला भयो । तल हेर्दा ती अखिलका कार्यकर्ता माथि नेवि संघका नेता कार्यकर्ताहरूले ढुंगा, खुकुरी र खुँडा बर्साइ रहेका थिए ।
नेविसंघको आक्रमणको चोट खप्न र प्रतिवाद गर्न नसके पछि त्यहाँबाट अखील कार्यकर्ता भागेका थिए । त्यसको केहि समय पछि बास्केटबल कोर्टमा नेता थापाले चर्को भाषण गरेका थिए । उनको त्यो चर्को भाषणमा उनले भनेका थिए “अब त्रिचन्द्रमा नेविसंघ बाहेक अन्य संगठनहरूले पस्ने कोसीस गरे खुट्टा काटेर रानीपोखरीका माछालाई खुवाइने छ ।”
थापाको उक्त ट्विट पढीसकेपछि मलाई उनको निर्देशनमा कलेजमा भएको घटना र उनको भाषणको झलझली याद आएको छ । अनि मलाई सोध्न मन लागेको छ थापाजी तपाईले त्रिचन्द्रमा घटाएको घटनाको बिचारा को थियो ? तपाई जस्ता कायरहरूलाई उक्साउने को थिए ? र ति घटनाका पिडीतहरूले को सँग हिसाब माग्नु पर्ने हो ?
यो प्रसङ्गमा रङ्गमङ्गीइरहँदा मलाई अहिले पनि लाग्दैन शाही माथि भएको आक्रमण जायज थियो भनेर । कुनैपनि हालतमा कसैले कसै माथि निषेध गर्ने, रानीपोखरीमा फाल्ने काम जायज हुँदै होइन । अझ नेकपाका कार्यकर्ताहरूबाट त यो संम्भव हुँदै हुँदैन । किनभने नेकपा मदन मण्डारीको आर्दशबाट निर्देशित पार्टी हो । जसले कहिल्यै निषेधको राजनीतिलाई कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । मदनले तत्कालीन माक्र्सवादी पार्टी सँग मालेको एकता मात्रै गराएनन् मनमोहन अधिकारीलाई आफ्नो नेता मान्न तयार भए ।
संसदिय निर्वाचन पछि अधिकारीलाई संसदिय दलको नेता मात्रै बनाएनन् आफ्ना सबैभन्दा ठुला आलोचक सिपी मैनालीलाई संसदिय दलको उपनेता बनाएर आफ्नो उदार र उद्वात हृदय देखाए । पार्टीलाई जनअनुमोदनबाट निखार्न जनताको वहुदलीय जनवाद जस्तो प्रतिष्पर्धी सिद्धान्त तर्फ अग्रसर बनाए ।
समय त्यहि थियो गगनले कायर भनेको नेकपा भित्र प्रजातान्त्रिक सौहार्दता थियो । तर थापाको माउ पार्टीले आफ्ना संस्थापक नेता गणेसमान सिंहलाई पार्टीवाट अलग्याएको थियो ।
किसुनजी र गणेसमान जस्ता नेतालाइ पार्टीमा स्थान सम्म दिन नसक्ने पार्टीको वर्तमान नेताको रूपमा गगनले ति कायरहरूलाई कुनै उत्तर दिनु पर्छ कि पर्दैन ? के गगनले शाहीको मानव अधीकारको वकालत गरीरहँदा उनले मानहानी गरेका नेकपाका नेता कार्यकर्ताको मानवअधीकारलाई बुझ्न सक्छन् ? थापाले यसको उत्तर दिनु पर्छ कि पर्दैन ? आजको जनआस्था बाट ।